Nke a bụ otu ụlọ oriri Cristiano Ronaldo dị na Portugal | Akụkọ Njem
Maria | | ulo, Portugal
Bọọlụ bụ egwuregwu nke ghọgoro ihe zuru ụwa ọnụ na ọtụtụ ijeri ndị na-eso ụzọ ya gburugburu ụwa. Klọb na ndị ịgba bọọlụ na-akpali oke agụụ n'etiti ndị Fans, yabụ ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na emepeela ụlọ oriri na ọ hotelụ forụ egwuregwu mara mma.
A maara asọpụrụ nke bọl na Argentina. Maka nke a, ọ nwere ike ọ gaghị abụ ebe ọzọ ebe emepere ụlọ egwuregwu izizi bọọlụ raara nye Boca Juniors. Otu ụlọ ọrụ kpakpando ise nwere nkasi obi niile yana uru pụrụ iche maka ndị ọbịa ya, dịka nzukọ ya na ndị egwuregwu ahụ, nleta ndị a na-eduzi na ebe ngosi ihe mgbe ochie Boca Juniors ma ọ bụ ohere ị ga-eji nweta ọzụzụ ọzụzụ otu.
Na nso nso Otu kpakpando nke egwuregwu a abanyela na omume a ma meghee otutu hotels nke ihe nile banyere egwuregwu, ndu di nma na ndi ya onwe ha: Cristiano Ronaldo.
Hotelslọ oriri na ọ7ụ CRụ CR18 bụ nsonaazụ nke njikọta n'etiti Portuguese kpakpando na Pestana Hotels & Resorts Group, bụ onye na-ahụ maka njikwa ọrụ nke ihe ndị ahụ. Ndị ahịa profaịlụ nke ụlọ oriri na ọ Cristianoụ Cristianoụ Cristiano Ronaldo bụ ndị na-eto eto nọ n’agbata afọ 35 na XNUMX bụ ndị nwere mmasị na teknụzụ, ndụ dị mma na ndụ mmekọrịta.
5 Ọnụahịa na ụlọ nkwari akụ CR7
Ọ bụ ụlọ nkwari akụ mara mma nke nwere ọnụ ụlọ iri asatọ na ụlọ mara mma dị na etiti obodo ahụ, mita ole na ole site na Praça do Comércio nke ihe atụ., n’otu ebe dabara adaba na afọ ole na ole gara aga. Site na Pestana CR7 Lisboa Hotels Hotels na ọrụ nnabata ndị ọzọ, ebumnuche bụ iji nwetaghachi Baixa ma mee ka ọ dị ụwa.
Mma nke ime ụlọ ndị ahụ na-arụ ọrụ ma pere mpe mana ntụaka maka egwuregwu na-aga n'ihu. Ọ bụghị naanị site na ọnụ ọgụgụ zuru oke nke Cristiano Ronaldo kamakwa site na ọnụnọ nke mpempe akwụkwọ egwuregwu nke asọmpi na oriri na nkwari akụ, tebụl foosball n'ọnụ ụlọ ma ọ bụ nnukwu ụlọ na mmanya ka ị ghara ịhapụ egwuregwu.
Na nkwari akụ nke na-akwalite ndụ ahụike, ị gaghị echefu mgbatị ahụ ebe ndị ahịa nwere ike na-emega ahụ ma meziwanye ahụike ha n'ihi nlebara anya ahaziri nke ụlọ nkwari akụ ahụ nyere. ya na mmemme mmega ahụ diri onye obula.
Na July, ụlọ nkwari akụ mbụ nke Cristiano Ronaldo malitere ịrụ ọrụ na Portugal, karịsịa na Madeira, agwaetiti ebe a mụrụ ya.
Aha ya bụ Pestana CR7 Funchal n'ihi na ọ dị n'isi obodo Madeira n'otu ụlọ na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-eche ihu n'oké osimiri nwere ọdọ mmiri, spa, ohere ịnweta CR7 Museum nke Funchal na ohere nke iji usoro ọzụzụ pụrụ iche na mgbatị ahụ dị n'èzí nke ndị egwuregwu ji aka ya mepụtara.
N'ime Pestana CR7 Funchal, e nwere ụzọ atọ dị iche iche na-ejikọ ọnụ na egwuregwu. Ha nwere ụdị nkasi obi dị iche iche, a na-ekpuchi ụda ma na-enweta site na ntanetị site na paseeji ahịhịa wuruwuru nke na-echetara ogige egwuregwu bọọlụ. On ọ bụla ụzọ e nwere nnukwu foto nke Ronaldo na bedrooms e nwere ihe osise nke ndụ ya.
N'adịghị ka ụlọ nkwari akụ Pestana CR7 dị na Funchal, ụlọ nkwari akụ ahụ nke ndị ọgba bọọlụ na-ezube imeghe na Madrid agaghị elekwasị anya na njirimara ya kama ụwa nke egwuregwu. Ọ ga-enwe njirimara nke ya n'ime akara a nke Pestana yinye na ụlọ elu ụlọ na ụlọ akụkọ ihe mere eme nke ụlọ Gran Vía ebe ha na-eme atụmatụ ịchọta ụlọ nkwari akụ ahụ ga-adị oke mkpa.
Dị ka mmasi, echiche ahụ bụ maka ụlọ nkwari akụ mbụ CR7 ka a ga-emepe na Madrid, mana n'ihi nsogbu ụfọdụ nke obodo ukwu na igbu oge n'usoro ọchịchị, a ga-eyigharị oghere nke ntọala na isi obodo Spanish.
N'afọ na-abịanụ, agbụ ụlọ nkwari akụ ya ga-abanyekwa n'etiti New York Times Square, ọ bụ ezie na obere nkọwa emeela maka ọrụ a.
Ọnụahịa na ụlọ nkwari akụ CR7
Ahịa dị n'etiti 250 na 1.250 euro kwa abalị dabere na ụlọ ahụ. Ha nwere ike ịdị ka ọnụ ahịa dị oke ọnụ mana mana ndị a bụ ụlọ nkwari akụ 5-nwere ọtụtụ ntụsara ahụ na teknụzụ kachasị ọhụrụ. Agbanyeghị, enwere ndị nwere obi abụọ na enwere ọtụtụ ndị na-eto eto nwere ike ị nweta ọnụahịa ndị a mgbe ha na-ahọrọkarị maka njem nleta dị ọnụ ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Portugal » Nke a bụ ụlọ oriri na ọ Cristianoụ Cristianoụ Cristiano Ronaldo na Portugal